Io no programa tsara indrindra hametrahana mari-drano | Famoronana an-tserasera
Inona no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano
Ny mari-drano dia famantarana izay, mihabetsaka, apetraka amin'ny sary mba hanakanana ny hafa tsy hampiasa azy ireo nefa tsy manome ny mari-pankasitrahana sahaza an'ireo olona naka sary ireo. Na izany aza, tsy maintsy apetraka an-tanana ao aminy ireo fambara ireo, noho izany, ny fahalalana hoe iza no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano mety hahaliana anao.
Ary, raha mpaka sary, mpamorona, mpamorona, mpanoratra ianao ... ary te hiaro ny zonao ara-tsaina noho ny asanao ianao, ahoana raha manao izany amin'ny mari-drano ianao? Fa, Inona ny programa tsara indrindra hametrahana fari-drano?
1 Voalohany indrindra, inona ireo mari-drano?
2 Inona no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano
2.2 Watermarks: WatermarQue
2.3 Pabrik orinasa
2.4 Watermarks: VirtualDub
2.5 Watermarks: PhotoWatermark Professional
2.7 Watermarks: PDFelement Pro
Voalohany indrindra, inona ireo mari-drano?
Alohan'ny handehananao miresaka aminao momba izay programa tsara indrindra hametrahana fari-drano, ny zavatra voalohany tokony hijanonantsika dia ny fahafantaranao ny atao hoe watermark.
Ity iray ity Azo faritana ho famantarana, famantarana, sns. manokana napetrakao, na ho sary, sary, lahatsoratra ... amin'ny zavatra anao ary tianao hamantarana izany mpanoratra izany. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe naka sary ianao ary te hizara azy, saingy fantatrao fa manintona ampy ho an'ny "olona tia zavatra hafa" hafa ity maka tahaka azy ho anao. Na mbola ratsy kokoa aza, ny fampidiran'izy ireo amin'ny tranokala iray ary andoavany vola ho an'ny famoronana anao.
Mba hialana amin'izany dia maro ny matihanina mandany ny fotoanany sasany amin'ny fiarovana ny asany. Ary noho izany dia mampiasa mari-drano izy ireo, izany hoe apetraka amin'ny sary, antontan-taratasy, pdfs ... famantarana manome mpanoratra azy ireo.
Ity dia mety ho sonia, lahatsoratra (ohatra ny pejin-tranonkala na ny anarana), na sary iray hafa. Tsy sarotra ny manao azy ary misy programa marobe afaka manampy anao hanao azy, fa, amin'izy rehetra, iza no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano? Ary holazainay aminao ny sasany.
Raha nangataka anay ianao hanoro iray fotsiny, tokony hilaza isika fa Photoshop io, satria izy dia tonian-dahatsoratry ny sary feno tokoa izay mamela anao hanao virguerías miaraka amin'ny sary (noho izany ireo orinasan-doka, magazine, sns dia mampiasa azy). Fa ny marina dia tsy io ihany no safidy.
Ary rehefa dinihina fa voaloa ny Photoshop, dia lasa izy ireo programa hafa izay azo raisina ho faran'izay tsara indrindra hametrahana mari-drano.
Izy io dia fampiharana maimaim-poana azonao ampiasaina amin'ny Windows ho programa ary tena mifantoka amin'izany, amin'ny fametrahana mari-drano. Ireo dia mety ho sary sy lahatsoratra ary manana tombony fa tsy mila ataonao indray mandeha. Izany no Tsy mila manitsy ny sary tsirairay ianao, fa manome anao safidy hanao azy rehetra indray mandeha.
Azonao atao ny mametraka an'io mari-drano io araka izay itiavanao azy, satria manome anao safidy ho an'ny habe, opacity, endritsoratra, loko ... Ary hitanao ny fanovana ataonao mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra.
Safidy iray hafa, amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny mpampiasa Mac dia ity, WatermarQue. Izy io koa dia programa maimaim-poana izay manatanteraka tsara ny asany. Ary azonao atao ny manamboatra ny mari-drano arakaraka ny toerana tianao. Inona koa, afaka manodina hatramin'ny 10 sary isaky ny mandeha, izay hanampy anao hitsitsy fotoana amin'ny fanaovana azy haingana kokoa.
Manana olana iray fotsiny izy, ary izany dia tsy havaozina, fa raha zavatra tadiavinao dia zavatra tsotra izay tena mandeha amin'ny zavatra tadiavinao, dia ny fametrahana mari-drano, dia hanompo anao tsy misy olana.
Ny fahalalana hoe iza no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano dia mandalo fanontaniana faharoa: aiza no tianao hametrahana azy ireo? Satria tsy mitovy amin'ny ao anaty antontan-taratasy, na horonan-tsary, na sary. Noho izany, raha ny nitondra anao teto dia satria mitady programa ianao hametrahana azy ireo ao anaty horonan-tsary dia manome safidy anao koa izahay.
Momba ny Factory Factory. Momba ny a programa maimaim-poana izay mamela anao hanova sary, horonan-tsary, audio ary sary amin'ny endrika samihafa. Saingy, eo amin'ireo asany, izy io koa dia manana hery hanampiana fikajiana rano amin'ireo horonan-tsary. Noho izany, mety ho safidy tsara izany.
Ary iray hafa, raha toa ka tsy naharesy lahatra anao ilay teo aloha, mifantoka amin'ny horonan-tsary koa, dia ity VirtualDub ity. Izy io dia programa ampiasain'ny matihanina, ary na dia mety hampitahotra aza izy amin'ny voalohany satria somary sarotra ny mampiasa azy, ny marina dia tsy hanome anao olana izany. Ianao dia afaka Manampia mari-drano amin'ny alàlan'ny sivana logo anananao, ary segondra.
Watermarks: PhotoWatermark Professional
Raha hiverenana ny lohahevitry ny fandaharana mifantoka amin'ny sary sy ny mari-drano, amin'ity tranga ity dia amporisihanay ity PhotoWatermark Professional ity. Tsy toy ny hafa, karamaina ity iray ity, na dia misy demo azonao jerena amin'ny Internet aza mba hitsapana azy.
Ary inona no azon'ity programa ity atao ho antsika? Afaka manomboka ianao mamorona ny mari-drano tianao, araka ny tianao, namboarina ary tsy misy fetra (Tehirizo ny fahaizanao mamorona, mazava ho azy).
Ity programa ity dia tena mora ampiasaina ary haingana be. Ho fanampin'izany, hamela anao hanisy endrika marika isan-karazany, ao anatin'izany ny kaody QR, izay lamaody ankehitriny. Mazava ho azy, amin'ny resaka fanovana sary dia tsy tsara toa ireo mpanova sary hafa, dia tena fototr'izany. Saingy satria ny ezak'izy ireo dia napetraka tamin'ny fanomezana fitaovana tsara hahafahana manaingo ireo mari-drano.
Watermarks: PDFelement Pro
Ahoana raha mitady programa tsara indrindra hanome mari-drano PDF ianao? Nieritreritra anao koa izahay, ary izany no antony nifidiananay an'ity, PDFelement Pro, a programa hanampiana marika amin'ny PDF mora foana.
Izy io dia programa maimaim-poana ary tsy mila manokatra azy io fotsiny ianao, manafatra ireo rakitra PDF tianao hapetraka ary asio azy, afaka manova azy.
Farany, ny tolo-kevitray momba apetraho amin'ny antontan-taratasy izy ireo dia ny tonian-dahatsoratra, na Word, LibreOffice Writing, Open Office Writer ...
Mazava ho azy, eo amin'ny ambaratonga fototra kokoa izy ireo, noho izany dia tsy ho azonao atao ny manitsy azy io na dia azonao atao aza ny mametraka habe, opacity sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Inona no programa tsara indrindra hametrahana fari-drano